အနက်ရောင်ဘုရားပေါင်းချုပ် - Afrikhepri Fondation
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာ 23, 2020
Five ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာလူမည်းများအားအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စုသုံးစု ခွဲ၍ သင်နိုင်သည်။
ရတာဟာ 85% အလွယ်တကူစိတ်ပိုင်း, နားပင်းသောစကားမပြောနိုင်သောနှင့်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်သူတို့ qui အတွက် Live ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် ပတ်သက်. အမှန်တရားမှမျက်စိကန်းသောအဆိုပါနှိမ့်ချထု Are ဘယ်သူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ဦးဆောင်ခံရဖို့ခဲယဉ်း၏မှားယွင်းတဲ့ဦးတည်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
သမ္မာတရားကိုအများကြီးနားလည်သူကားအဘယ်သူရတာဟာ 10% ဘာသာရေး, နိုင်ငံရေး, ဖျော်ဖြေရေး, စီးပွားရေးနှင့်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ 85% ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့၏အားသာချက်မှအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်။
ဘဝနှင့်မိမိကိုယ်ကို၏အမြစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသမ္မာတရား Repossessed အသိပညာရှိခြင်းသည်ဉာဏ်အလင်းဘုရားသခငျ့သတ္တဝါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပညာရေးမှတဆင့်ပြစ်ဒဏ်ခတ် 5% လှတျမွောကျစရှာအံ့သောငှါအဘယ်သူသည်ရတာဟာ 85% ။
အဆိုပါတင်ပြရာခိုင်နှုန်းအတိအကျကိုရည်ရွယ်ချက် Be ဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်အစားအများသုံးဖြစ်ပြီး, ဘာသာရေး, နိုင်ငံရေးအစိုးရသောမင်းတို့နှင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအဆိုပါအနည်းငယ်အမှန်တကယ်ဉာဏ်အလင်းလူများ, respectivement ကိုယ်စားပြုဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။
ဘုံ features တွေထွက် mark ရန်အသုံးပြုနံပါတ်များအဲဒီသုံးအုပ်စုများ၏အဖွဲ့ဝင်များခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်အပြည့်အဝအဓိပတိသင်္ချာ၏ဘာသာစကားကို အသုံးပြု. နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သိစိတ်ကို: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သိစိတ်ကို qui est ဘုရားသခငျ့ဤလောက၌အကြှနျုပျတို့၏မူလအစ၏ဝိညာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သိစိတ်ကိုက Black လူမျိုး၏တစ်ခုတည်းသောသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အသိအမြင်နှင့်မတူညီသောကျနော်တို့-ရှိသည်ဟုလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ဘိုးဘေးတို့နှင့်မိခင်များအားဖြင့်အဖြူဖြစ်ခြင်း, ကမ္ဘာ့လူ့ယဉ်ကျေးမှုမှပံ့ပိုးမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သိစိတ်ကိုကျွန်တော်မည်သို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထဝီဇစ်မြစ်အားလုံးကိုတဦးတည်းကလူများမှာထိုအသိအမြင်သည်နှင့်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်အင်အားစုများ၏ကြီးစိုးနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်လွတ်မြောက်ရန်နှင့်ဖြစ်တည်မှုက Universal မေတ္တာအစိုးရ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသို့ရောက်စေဖို့ အကယ်. ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးအဖြစ်ရုန်းကန်ရမယ်ဒါက ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌ရှိသမျှသောလူတို့အဘို့။
ရပ်ရွာထိန်းချုပ်ရေး: ပညာရေး, စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, မီဒီယာနှင့်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အဝန်းထိန်းချုပ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ကြသည်။
သဘာဝကျကျဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံထဲကအဝန်းထိန်းချုပ်ရေးစီးဆင်းမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်လိုအားကျနော်တို့လူတစ်ဦးအတွက်အဓိပတိခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြမ္မာ၏တစ်ဦးတည်းသောနဲ့ controller ရှိပါတယ်ဒါက qui သွန်သင်; ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်တွင်ရရှိနိုင်ဖို့ကွိုးစားဒါကစုပေါင်းအဆင့်တွင် Sami အဘိဓါန်ထိန်းချုပ်မှုရှိရမည်။
ကျနော်တို့-ရှိသည်ဟုအပြည့်အဝအဝန်းထိန်းချုပ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှသာသည့်အခါကျွန်တော် qui လွတ်လပ်မှုဖြစ်ပါသည်, ကမ္ဘာ့အကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျယဉ်ကျေးမှု၏တန်ခိုးအာနုဘော်တန်ခိုးအာနုဘော်စုံစမ်းနိုင်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ငွိမျးခမျြးရေး။ ငွိမျးခမျြးရေးရှုပ်ထွေးမှုများ (ပရမ်းပတာ) ၏မရှိခြင်းသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏မရှိခြင်းအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံဘဝ qui ကြွင်းသောအရာပေါ်မှာအလွန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
အဓိပတိသင်္ချာပုဠာ၏ဥပဒေနှင့်အမိန့်ဖြစ်တယ်, ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာ၏သိပ္ပံ, qui est ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဖြစ်ပါတယ်။
ငွိမျးခမျြးရေးတပြင်လုံးကိုအကြိုးအတှကျအဓိပတိနားလည်မှု entre လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
စကြဝtoာနှင့်လူသား၏ဆက်ဆံရေး အစ္စလာမ်သည်သဘာ ၀ လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘဲဘာသာရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲဒီပညာရေးဟာလူဦးအဖြစ်လုံလောက် Seif ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ဖို့ငျဆငျခံရ shoulds ။
အဆိုပါအနက်ရောင်က Man ယဉ်ကျေးမှု၏ခမည်းတော်သည်အ
ရှေးဟောင်းနှင့်သမိုင်းမကမ္ဘာတွင်တစ်လျှောက်လုံး Known အားလုံးယဉ်ကျေးမှု၏တည်ထောင်သူလူမည်းတွေ--ခဲ့ကြပြီ။
• pre-ဂရိ Minoan အဘိဓါန်များနှင့် Mycenean ယဉ်ကျေးမှု qui, ရှေးဟောင်းဂရိနှင့်ရောမ birthed
• pre-ဆီးမိုက်နှင့်ခါလဒဲဗာဗုလုန်မြို့သား, စူမီးရီယန်နှင့်သူတို့၏ကအခြားအရှေ့အလယ်အိမ်နီးချင်း
•သိသာထင်ရှားတဲ့ကုရှနဲ့အာဖရိကအဖြစ်လူသိများသည့် Black ကတိုက်ကြီးအခြားယဉ်ကျေးမှု,
•အ Olmecs, မာယာနှင့် (ကိုလံဘတ်စ်ကဒီမှာသူ့ကနဦးခရီးစဉ်အပျေါ၌ထည့်လေ့မရှိသည့် Black ကအင်ဒီးယန်းအပါအဝင်) အမေရိကတိုက်၏အခြားအစောပိုင်းက Black Pre-Columbian ယဉ်ကျေးမှု
•အိန္ဒိယအတွက် Indus မြစ်ချိုင့်ဝှမ်း၏ရှေးဟောင်းက Black ယဉ်ကျေးမှု,
လူမည်းများ၏စွမ်းရည်များစီရင်ချက်ကိုပယ်မှဥရောပသားများကခေတ်ပြိုင်ကြိုးစားခြင်းမှီ, က Black သောသူကဲ့သို့မှတ်ခဲ့-ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါနက်နဲသောအရာကျောင်းများအတွက်ရှေးအဲဂုတ္တု Black ကဆရာ, ဆရာမတွေထဲမှာလေ့လာခဲ့ဝေးမြေများထဲကနေဧည့်သည်။
ထီစစ်မှန်တဲ့နှင့်အသကျရှငျဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဘဲပလေတိုသည်, အဓိပတိဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဂရိနတ်ဘုရားတို့၏လူ့အားနည်းချက်တွေကိုနှင့်အတူမကျေနပ်တဲ့ထင်ရှား။ ,
ဟေလသလူနေဆဲအဲဂုတ္တု Black ကယောက်ျားအားချီးမွမ်းနှင့်ကိုးကွယ်, ထပလေတို၏ခေတ်မှ, ခံခဲ့ရသည်။
ဤအချက်အလက်များကိုဂျော့ဂ်ျဂျိမ်းစ်ဂျိမ်းစ်မှခိုးယူထားသောအမွေနှင့်မာတင်ဘာနာ၏ Black Athena တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ဥပမာဇုနှင့် Hercules, ပြီးနောက်-Osiris နှင့် Horus လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြတဲ့အဘယ်သူနှင့်လေးစားသူက Black ဘုရားအင်မ်ဟိုပါဝင်သည်
ဆေးပညာ၏မူလတန်းအယူဝါဒသည် Hippocratic ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်။